ကမ္ဘာပေါ်တစ်ဝှမ်းလုံး ချင်းလူဦးရေ ခန့်မှန်းခြင်း - Chin World
Home Opinion ကမ္ဘာပေါ်တစ်ဝှမ်းလုံး ချင်းလူဦးရေ ခန့်မှန်းခြင်း
ချင်းလူမျိုးများသည် ချင်းပြည်နယ်သို့ မရောက်ရှိမီ မြန်မာနိုင်ငံ နေရာအနှံ့အပြားမှာ ရာစုနှစ်ပေါင်း မြောက်များစွာ ပြန့်နှံ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ သမိုင်းအထောက်အထားအရ အေဒီ (၂၀၀)မှ (၄၀၀) ခန့်အကြားတွင် ကချင်ပြည်နယ် ဟူကောင်းတစ်ဝိုက်၊ အေဒီ ၇၀၀ ဝန်းကျင်တွင် ချင်းတွင်းမြစ်တစ်ဝှမ်း (‘ချင်းတွင်း’ဆိုသည့် အမည်သည်ပြင်လျှင် ချင်းတွေနေထိုင်ခဲ့သည်ကို အစွဲပြု၍ မှည့်ခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်)၊ ထိုမှ အေဒီ (၉၀၀) ကျော်တွင် ကလေး-ကဘော် ဒေသဘက်သို့့ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ အချို့မှာမူ ချင်းတွင်းမြစ်အနောက်ဘက်သို့ မသွားဘဲ အောက်ဘက်သို့ ဆင်းလာခဲ့ကြသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ချင်းလူမျိုးများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဦးစွာ ရောက်ရှိသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများထဲက အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမှတဆင့် ချင်းလူမျိုးအများစုသည် အေဒီ (၁၃၀၀) ဝန်းကျင်တွင် ယခုချင်းပြည်နယ်၊ အိန္ဒိယ်နိုင်ငံ မီဇိုရမ်းပြည်နယ်၊ မဏီပူရ်ပြည်နယ်၊ နာကလဲန်ပြည် စသည်တို့နှင့် ဘင်္ဂလားဒေစ်နိုင်ငံဘက်သို့ တစ်သုတ်ပြီးတစ်သုတ် ထပ်မံ ရွေ့ပြောင်းလာကြလေတော့သည်။
လက်ရှိကမ္ဘာမြေပေါ်တွင် ချင်းလူမျိုး လူဦးရေဘယ်လောက်အထိ ရှိမည်နည်း။ ဤနေရာတွင် (၂)ပိုင်းဖြင့် တင်ပြလိုပါသည်။ တစ်ပိုင်းသည် ၁၉၄၇ ပင်လုံစာချုပ်အရ မြန်မာနိုင်ငံသား ခံယူထားသော ချင်းလူမျိုးများ လူဦးရေစာရင်းဖြစ်ပြီး ဒုတိယအပိုင်းသည် (၃)နိုင်ငံတွင် ပိုင်းခြားခြင်းခံရသော ချင်းလူမျိုးများ (ချင်းခံယူထားသူရော မခံယူထားသူရောအားလုံး — ချင်း၊ ကူကီး၊ ဇူမီး၊ မီဇိုးနှင့် မြို(ခမီး)စသည်များ) အားလုံး ပေါင်းသည့် ချင်းလူဦးရေခန့်မှန်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကရော မိမိတို့ကပါ ချင်းလူမျိုစုဝင်တစ်ခု အဖြစ် လက်ခံ သည့် ‘နာဂ’အုပ်စုများမှာမူ သက်ဆိုင်ရာ လူမျိုးစု၏ သီးခြားနေထိုင်မှုနှင့် မိမိကိုယ်မိမိခံယူမှုပိုင်းအရ စာရင်းထဲမှာ ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသေးပေ။
၁၉၄၇ ပင်လုံစာချုပ်အရ မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်သော၊ ဖြစ်ခဲ့သော ချင်းလူမျိုးများလူဦးရေစရင်းကို ခန့်မှန်းကြည့်ရာတွင် ၁.၅သန်း (တစ်သန်းခွဲကျော်)ရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။ ချင်းပြည်နယ်အတွင်း ချင်းလူဦးရေ (၅)သိန်းခန့်၊ ချင်းပြည်နယ်ပြင်ပ မြန်မာနိုင်ငံနေရာဒေသ အနှံ့အပြားတွင် လူဦးရေ (၈)သိန်းထက်မနည်း ပြန့်နှံ့နေထိုင်ကြသည်။ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတွင် (၃)သိန်းခန့်၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး တွင် (၂)သိန်းခန့်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် (၁.၅)သိန်းကျာ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတွင် ငါးသောင်း ဝန်ကျင်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွင် ငါးသောင်းဝန်ကျင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးတွင် နှစ်သောင်းဝန်းကျင်နှင့် အခြားတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များတွင် သောင်််းဂဏန်းဖြင့် အသီးသီး နေထိုင်ကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ချင်းပြည်နယ်ပြင်ပ(မြန်မာနိုင်ငံ)ရှိ ချင်းလူမျိုးများ ခန့်မှန်းခြေလူဦးရေ
Estimated Population of Chin outside Chin State (Domestic)
State & Region ခန့်မှန်းလူဦးရေ
Est. Pop. ၁၉၃၁-လူဦးရေ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၃၀၀,၀၀၀ ၉,၄၉၉ ၁၆၇,၉၉၀ ၁၃၈,၇၀၆
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၂၀၀,၀၀၀ ၆၅,၅၃၆ ၁၁၃,၈၆၈ ၇၈,၈၇၉
ရခိုင်ပြည်နယ် ၂၀၀,၀၀၀ ၆၇,၆၆၀ ၉၃,၃၃၁ ၆၃,၅၀၃
ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၅၀,၀၀၀ ၁၆,၇၀၉ ၄၃,၂၄၃ –
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၄၀,၀၀၀ ၂၂၀ ၁၁,၀၄၁ –
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၂၀,၀၀၀ ၅,၄၄၆ ၁၁,၀၃၄ –
အခြားပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၃၀,၀၀၀ ၄,၂၈၁(မန္တလေးတိုင်း) ၂၃,၅၉၂ –
၂၀၁၄ခုနှစ် သန်းခေါင်စာရင်းအရ သက်ဆိုင်ရာ လူမျိုးအလိုက် လူမျိုးစာရင်းကို ဖော်ပြခြင်းမ မရှိသော်လည်း ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ မဲစာရင်း၊ ၎င်း မဲစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခြင်းမရှိသော ချင်းလူမျိုးများနှင့် မျိုးနွယ်စုများ၊ ထိုမှ (၄)နှစ်ကြာလာသည့် တိုးပွားမှု ခန့်မှန်းခြေ၊ ထို့ပြင် ဗိုလ်မှုးကြီးလှမင်း ရေးသား၍ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက (၂၀၀၀)ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သည့် Political Situation of Myanmar and Its Role in the Region စာအုပ်နှင့် ၁၉၃၁ခုနှစ် အင်္ဂလိပ်ခေတ်သန်းခေါင်စာရင်း စသည်တို့ကို အခြေခံ၍ အထက်ပါအတိုင်း ပေါင်းစပ်ခန့့်မှန်း ပြုစုခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အလားတူ စစ်အာဏာရှင်စနစ် အဆက်ဆက်အောက်တွင် ခွဲခြားဆက်ဆံမှုနှင့် ဖိနှိမ့်မှုအမျိုးမျိုး ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရလို့ နိုင်ငံပေါင်း (၃၀)ကျော်တွင် ဒုက္ခသည်အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ပြောင်းရွေ့လုပ်သားအဖြစ် ဖြင့်လည်းကောင်း ချင်းလူမျိုးနှစ်သိန်းခွဲ(၂၅၀,၀၀၀)ကျော် ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ကြပါသည်။
အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်း ချင်းလူမျိုးများသည် အင်္ဂလပ်ကိုလိုနီအုပ်ချုပ်ခဲ့သည့်နောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာနယ်နိိိမိတ်ကြောင့် နိုင်ငံ(၃)ခုတွင် ပိုင်းခြားခံရပါသည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ မီဇို၊ ကူကီး၊ ထာဒို၊ ဗိုင်ဖေး(Vaiphei)၊ မလင်(Malin)၊ အနုမ်Anun)၊ မှာရ်(Hmar)၊ ဘိုင်သေး(Baihte)၊ ပိုက်သေး(Paihte)၊ ဇို(Zo)နှင့် ဘင်္ဂလားဒဲစ်နိုင်ငံက ဘွမ်(Bawm)မျိုုးနွယ်စုတို့သည် ချင်းလူမျိုးထဲက လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းဖြစ်ကြပြီး လူဦးရေအားဖြင့် (၂)သန်းကျော်ရှိပါသည် (မီဇိုရမ်းပြည်နယ်တစ်ခုတည်းတွင် ၁ သန်းကျော်ရှိသည်)။
အမှန်စဉ်စစ် ချင်းလူမျိုးစုများသည် မြန်မာနိုင်ငံမှာထက် အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် လူဦးရေပိုများနိုင်ခြေ ရှိပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရှိ (၁.၃)သန်းခန့်နှင့် နိုင်ငံတကာမှာ နေထိုင်သည့် (၂.၅)သိန်းကျော်နှင့် ချင်းလူမျိုး မခံယူထားသော အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ ချင်းနွယ်စုအားလုံးပေါင်းလျှင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ချင်းလူဦးရေသည် (၃.၅)သန်းမှ (၄)သန်းခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းပါသည်။
Previous post တန်းတူရည်တူ ပညာသင်ယူခွင့်ရရေး ဖော်ဆောင်ပေးပါ
Next post ဟားခါးမြို့တွင် နှာခေါင်းစည်း(Mask) မတပ်ဘဲ အပြင်ထွက်သူများအရေးယူမှု ဆက်လက်ဆောက်ရွက်မည်